महिन्द्राको ५ लाख पुरस्कार ताप्लेजुङका खतिवडालाई Bizshala -
महिन्द्राको ५ लाख पुरस्कार ताप्लेजुङका खतिवडालाई
काठमाण्डौ । महिन्द्रा टु–व्हीलर्स् लिमीटेडको आधिकारिक वितरकको रुपमा महिन्द्रा बाइक तथा स्कुटरहरुको विक्रीवितरण गर्दै आइरहेको अग्नि मोटो इन्क प्रा. लि.ले गत आश्विन महिनाको दशैं क्याम्पेन अन्तर्गत ल्याएको “महिन्द्रामा यसपाली, लखपति बनौं दुई ताली” नामक स्किमको महाविजेता बुधबार घोषणा गर्नुका साथै रु. ५ लाख नगद उपहार समेत प्रदान गरेको छ ।
विर्तामोड–७, झापा स्थित साई अटोमोबिल प्लाजा प्रा. लि.अन्तर्गत ताप्लेजुङ्गका हरि खतिवडाले सो नगद उपहार पाउन सफल भएका हुन् ।
स्किम अनुसार स्क्रयाच् कार्ड मार्पmत उनले सो धनराशि जितेका हुन् । यसरी समय समयमा विभिन्न चाडपर्व तथा अन्य कार्यक्रमहरुको अवसरमा कम्पनीले आफ्ना ग्राहकहरुलाई स्किम तथा अफरहरुमार्पmत अतिरिक्त अफर दिंदै आएको छ ।